Intel waxay si rasmi ah LibreOffice ugu soo bandhigeysaa AppStore | Laga soo bilaabo Linux
LibreOffice, fargeeto ah OpenOffice taas oo xitaa dhaaftay ilbiriqsigan, uma maleynayo soo bandhigid badan in loo baahan yahay, sax? 🙂
Intel... si fiican, uma baahnin inaan sharaxno waxa ay tahay sidoo kale Intel ????
Muhiimadu waxay tahay Intel wuxuu leeyahay dukaan sofweer, degel uu ku soo bandhigo softiweer qalabka CPU Atom: Intel AppUp.
Waxay dhacdaa in by AppUp, Intel waxay bixisaa si bilaash ah loogu soo dejiyo LibreOffice, taas oo aan shaki ku jirin inay tahay talaabo horumar u ah bulshadeena, heerarka furan, iyo sidoo kale ... laga yaabee inay tahay talaabo dib u dhac ah Microsoft Office?
Si loo helo LibreOffice ee Intel AppUP halkan waa iskuxiraha:
LibreOffice on Intel AppUp (SM) xarunta
Hadda ... tani maahan oo kaliya in Intel ay ku bixiso bilaash bilaash ah, tani way sii socotaa.
Intel waa xubin ka mid ah Dukumentiga Dukumentiga, haddii tan aan ku dareyno taas Daari Foster (Intel Open Source Community Leader) wuxuu yiri:
Waxaan u isticmaali jiray LibreOffice ilaa maalinti koowaad bandhigyada shirarka iyo sidoo kale falanqaynta xogta. Injineeradeenu waxay la shaqeeyeen koodhka aasaasiga ah ee 'LibreOffice' si ay ugu hagaajiyaan agabkeena Intel. Ku darista Xarunta AppUpSM ayaa macno samaynaysa, waxay siin doontaa awood aad ufiican dhammaan isticmaaleyaasha Ultrabook.
Ma aqaano adiga, laakiin waxaan u maleynayaa in talaabo weyn oo horay loo qaaday halkan lagu qaaday 🙂
Waxaad ka akhrisan kartaa ogeysiiska ah Diiwaanka Dokumentiga: Intel wuxuu xubin ka noqday Guddiga La Talinta ee TDF
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Intel waxay si rasmi ah u siisaa LibreOffice soo dejintooda AppStore
Weli waxaa jira in Ace uu kor u qaadayo gacantiisa, iskudhaf u dhexeeya Lotus Symphony iyo OpenOffice ... link
Hagaag, ma aanan aqoon Intel AppUp, waa war u wanaagsan Libreoffice, aniga ahaanna inaan haysto Atom, ka fiican kan ka wanaagsan!
Hadaad awoodo, markaad isticmaasho, noo sheeg hadii wax qabadku hagaagayo, haduu dhakhso yahay / dareerayo 😀
Haa, maxaa igu waajibey inaan isticmaalo toddobaadkan iyo usbuuca soo socda si aan u isticmaalo kumbuyuutar walaalkay la leh Windows-ka maxaa yeelay waan isku dayi doonaa si hubaal ah.
Mhh Ma fahmin sababta haddii intel ay ka caawiso mashruuca, lacagtooda oo dhanna aysan isku dayin in ay waxoogaa ka beddelaan isweydaarsiga, waxay noqon lahayd wax cajiib ah.
Aniguba waxaan isticmaalaa Atom waxaanan sheegi karaa inay ku bilaabanto Qoraha sidii oo ay ahayd Leafpad 😛
La heli karo LMDE Cusboonaysiinta Xidhmada 4: Waxay ka caawisaa soo sheegidda khaladaadka